Nhau - Vhidhiyo bhurocha rinotungamira pasirese sechizvarwa chizvino chekushambadzira midhiya
Vhidhiyo bhurocha rinotungamira pasi rose sechizvarwa chizvino chekushambadzira midhiya
Sechizvarwa chitsva chemagetsi zvigadzirwa zvekusimudzira zvigadzirwa, vhidhiyo bhurocha rakakonzera shanduko nyowani yekushambadzira munzvimbo zhinji dzepasi painongopinda mumusika. Iine yakasarudzika mutengi dhizaini dhizaini, yakanakisa chitarisiko kudhinda uye ine simba yemukati yemagetsi vhidhiyo yekutamba basa, chigadzirwa chinoonesa yakasarudzika yekambani yekusimudzira pfungwa uye inowedzera iyo yepamusoro-magumo uye yakasarudzika mufananidzo
Kuunza kudhinda kwako kuhupenyu nezwi uye chiono! Bespoke masevhisi eVakasika, maMarketeers, uye maPrinta.
Yedu mavhidhiyo mabrochure anotarisana nehukuru, nechidiki diki skrini ichienzaniswa neiyo iPhone kana smartphone uye hombe kune piritsi kana IPad.
• Iko kusanganiswa kwepepa album neLCD skrini kunoita kuti chigadzirwa chako kana mucherechedzo sando yakanakisa yekuona.
• Mune yakapusa yakagadziriswa maitiro, isu tinoona yega runyorwa pfungwa yako.
• Iyo magineti switch iri nyore kushandisa. Vhura iyo kuti utambe vhidhiyo uye uvhare kuti uvhare.
• Iyo bhatani basa uye saizi saizi inosarudzika. USB 5V yekuisa uye bhatiri rinowedzerwazve.
Vhidhiyo bhurocha yakachinja iwo asinganetsi mapepa mabrochure uye echinyakare kusimudzira nzira; inounza vashandisi vhidhiyo inoshamisa chero nguva uye chero kupi nenzira yeiyo inotakurika odhiyo-inoona kushambadza. Zvinotonyanya kukosha, yakaona iyo isina-chipingidzo pabhokisi pakati pezvigadzirwa zvekambani nevashandisi.
Vhidhiyo bhurocha inozvirumbidza yakasarudzika chigadzirwa kusimudzira pfungwa, iyo inounza vashandisi vane simba, inonzwisisika uye matatu-matatu mativi ekunzwa. Yakasarudzika yakasarudzika yekusimudzira modhi inomutsa kufarira kwevashandisi muchiratidzo uye inogadzira isingakanganwike pane iyo kambani. Panguva imwecheteyo, zvinoita kuti vashandisi vafunge kuti ndiwe wega.
Vhidhiyo bhurocha rinopa mazano ekambani zvese zvine simba uye zvine hunyanzvi, zvinozorodza kwatiri. Inoita tsika yemubatanidzwa, zvigadzirwa zvekambani, nezvimwewo zvakanyanya kusarudzika uye inozviratidza padanho repamusoro zvizere, zvichiunza zvirinani kushambadzira.